PYROBOCITY – Page4– We create something new for better future
ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ image ထဲက region of interest(roi) ကို opencv ကိုသုံးပြီး ဘယ်လို select လုပ်ရမယ် ပြီးတော့ ဘယ်လို crop လုပ်ရမယ်ကို ကြည့်လိုက်ရအောင်။ဒါက basic tutorial ပါ ဘာဆိုဘာမှ ဆန်းတာမပါပါဘူး Opencv Lib ရဲ့ method လေးယူသုံးလိုက်တာပါ။ကျွန်တော်ဒီ tutorial ကိုဘာကြောင့်တင်ပေးတာလဲဆို ကျွန်တော့်blog reader တွေ computer vision နဲ့ စိမ်းနေတယ် beginner tutorial လဲဖတ်ချင်မယ်ထင်လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ကျွန်တော့်ဒီ blog ကို …
အားလုံးဘဲ ကျနော် အခုတင်ပြပေးမှာကတော့ VirtualBox မှတ်စုများလို့ နာမည်ပေးထားပါတယ် ခင်ဗျ အခုရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ VritualBox နဲ့ ပတ်သက်လို့ အဓိကအကြောင်းလေးတွေနဲ့ computer သမား ၊ network သမားတွေအတွက်ရေးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ VirtualBox ဆိုတာဘာလဲ ? Virtualbox ဆိုတာကတော့ Virtualization Technology ကိုအသုံးပြု နိုင်ဖို့ ပြု လုပ်ထားတဲ့ software တခုဖြစ် ပါတယ်။ Open Source ဖြစ်ပြီးတော့ freeware ဖြစ်ပါတယ် ။ VirtualBox ပေါ်မှာကျနော်တို့ …
Posted by Min Thura Zaw
ဒီ post ကတော့ android ကိုစလေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက် android libraries တွေအကြောင်း ရေးထားတာပါ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ “what is libraries in programming?” ပေါ့။ In computer science,alibrary isacollection of non-volatile resources used by computer programs, often for software development. (definition from wikipedia). Library တစ်ခုဆိုတာက resource တွေစုထားတဲ့အရာတစ်ခုပဲ အဲ …